Pindura nekukurumidza: Unogona here kubika burger pamberi? - Ndiri kubika
Pindura nekukurumidza: Unogona here kubika burger pamberi?
Unogona here kudziyisa mahamburger?
Unoita sei kuti uchengete burger nyowani mushure mekubika?
Unoita sei kuti uchengetedze burger yakanyorova mushure mekutsva?
Chii chandingaite neakasara hamburger patties?
Unogona here kupisa Mcdonalds burger?
Ndobika sei burger ndisina kuoma?
Unoita sei kuti ugadzire burger yakanyorova kana yabikwa?
Iwe unogona here kuchengeta hamburger ichidziya mune crockpot?
Sei uchiisa ice cube pane burger?
Chii chakavanzika kune juzi burger?
Ndini ndinofanira kubika burger?
Hamburger yakasara yakanakira kwenguva yakareba sei?
Chii chandingaite nemabhaga akasara nehot dogs?
Chii chandinofanira kushandira nenyama yehamburger?
Nguva inotevera paunenge uchivaraidza vaenzi, funga kubika maburger ako maawa mashoma pachine nguva uye nekuachengeta mumvura kusvika yave nguva yekudya. … Gadzira maburger ako kuita mapatties wochengeta mufiriji kusvika maawa makumi maviri nemana. Fukidza munyu uye mhiripiri kumativi ose epapati musati wabika.
Dzorerazve Burger Uchishandisa Ovhheni
Nzira yakanakisa yekudzokorora burger ndeye kushandisa ovhoni. Iyi ndiyo yakapusa, nzira inoshanda kwazvo yekupisa bundu nepati pasina kubvisa kunhuwirira. Kushandisa hovhoni kunobatsira iwe kunakidzwa ne burger sekunge ichangoburwa pane iyo grill. Preheat oven kusvika 400 degrees Fahrenheit.
Mushure mekubika hamburger, unogona kudziisa dzichidziya muchoto chakapiswa kusvika 200 degrees Fahrenheit. Kana uchibika burger yeboka rakakura, zvinoita kuti vagare vachidziya kusvikira vese vagadzirira. Kuvatendera kuti vatonhore kunoita kuti vasanyanya kufarira uye, zvakanyanya kukosha, kunopa njodzi yekurwara kwekudya.
ZVINONAKIDZA: Frequent question: Should I put olive oil on steak before grilling?
Kana iwe uchida hamburger ine muto, zvinobatsira kudzorera imwe yeiyo yakarasika mwando. Nzira iri nyore ndeyekuwedzera mvura kana imwe mvura kumusanganiswa we burger. Isu takaona kuti maaspuni maviri kusvika matatu eaya echando-anotonhorera emvura akasanganiswa mupondo yenyuchi pasi inowedzera hunyoro hwebhuregi dzakakangwa.
11 Genius Nzira dzeKushandisa Leftover Hamburger
Cheeseburger Pasita. Gadzirira yaunofarira macaroni uye cheese recipe. …
Mufudzi Pie. …
Meaty Yakabikwa Cheese (aka Patty Melt)…
"Meatball" Sandwiches. …
Hamburger Steak Nemakoko. …
Dzakakwirirwa mhiripiri. …
Cheeseburger uye Kumba Fries Omelet. …
Manomano ekudziisazve zvakakwana kuaisa mu microwave nebepa riri pa 35 seconds. Uhu hunyengeri hwakakwana kumazuva iwayo paunongomuka uchida girizi cheeseburger.
Shandisa chete yemombe yakanaka, munyu uye mhiripiri. …
Unofanirwa kuchengetedza nyama yepasi inotonhora sezvinobvira, kudzivirira mafuta kuti asanyunguduke mairi usati waibika. …
Gadzira munyu kunze kwemabhegi ingangoita 1 awa usati wabika.
Tora pani yakanaka (kunyanya yakakandwa simbi griddle) chaizvo, chaizvo, inopisa chaizvo.
Ini ndaizoisa zvinyoro nyoro mapepa mapepa mukati mega yega burger patty kuichengeta yakanyorova uye firiji. Kana iwe uchizovaisa pane iyo grill yakareba zvakakwana kuti udziyise kubva kune firiji nyika uye kusungunuka chizi, saka iwe unogona zvakare kuvabika panguva yemafaro.
ZVINONAKIDZA: Best answer: Do you have to wash broccoli before cooking?
Heino mhinduro yako: Unogona kuchengeta hamburger yako yakabikwa ichidziya nekushandisa chinononoka kubika. Kuti udziye, isa mahamburger mune inononoka cooker uye pamusoro nemvura. Gadzirisa moto wemubiki unononoka kuti udziye.
Iyo ice cube inodzivirira ma burger kubva pakubika uye nekuwedzera imwe yehumwe hunyoro kune nyama yemombe - chimwe chinhu chinonyanya kubatsira kana iwe uchinyura pane makuru mateti. Izvo iwe zvauchazoita kutora bhora revhu remombe, zvinyoronyoro pusha zvishoma ice cube pakati, uye woita nyama yemombe yakatenderedza iyo kuti ive yakavharwa.
Heano matipi emubiki kuburitsa yekupedzisira, yekuratidza-kumisa burger:
Shandisa 80/20 pasi chuck. …
Gadzira chigunwe chemukati pakati pepati. …
Mwaka nemunyu uye mhiripiri CHETE. …
Shandisa mafuta eCanola, simbi yakakandwa uye kupisa kwakanyanya. …
Flip kamwe. …
Tora tembiricha chaizvo. …
Usatya kusanganisa chizi. …
Wedzera mvura kuti inyause chizi.
Isa burger pane grill kabati uye bika, uchimirira ingangoita 4 maminetsi usati wabaya. Pheka kusvikira mativi ese ashandirwa uye burger inogadzirwa kune chaunoda, ingangoita maminetsi gumi zvachose wepakati-asingawanzo, 10-ounce burger. Regai burgers vazorore kwemaminitsi mashanu vasati vashumira.
Kana pasi yenyuchi yakaiswa mufiriji nekukurumidza mushure mekubika (mukati memaawa maviri; awa rimwe chete kana tembiricha iri pamusoro pe90 ° F, inogona kuchengetedzwa mufiriji zvakanaka kwemazuva angangoita matatu kana mana.
ZVINONAKIDZA: Chii chinoitika kana ukashandisa mafuta ekubikisa mumotokari yako?
Shandisa imbwa dzinopisa dzakasara uye hamburger nekuzviwedzera kune:
macaroni uye chizi.
Wild Howa uye Beef Stroganoff.
Rigatoni neBeef uye Green Olives.
Beef uye Portobello Stroganoff.
Yakarongedzwa Tomate ine Lean Ground Nyuchi.
BBQ Mufudzi's Pie.
Bulgur uye Beef Stuffed Peppers.
Ndeipi tembiricha inofanirwa kunge nyama soseji painobikwa?
Chinangwa chakabikwa tembiricha yesoseji mbishi ndeye 160 degrees Fahrenheit, uye pa
Iwe wakabvunza: Unobika sei noodles zvakanaka?
Ndeipi nzira chaiyo yekubika noodles? Mirayiridzo Muhari huru, uyai
Unogona here kudya yakabikwa broccoli zuva rinotevera?
Yakachengetwa zvakanaka, broccoli yakabikwa ichagara kwemazuva matatu kusvika ku3 mufiriji.
Iwe wakabvunza: Ndinogona kubika sausage yeRichmond kubva muchando?
Kubika Mirayiridzo - Zvakawanda: Kuti uwane mibairo yakanaka bika kubva muchando. Hapana chikonzero chekunyunguduka.
Frozen Kievs inotanga kubikwa here?
Ko chando huku Kievs mbishi? Inonaka kana hovhoni yakabikwa kubva mufiriji. Your
Mhinduro Yekukurumidza: Kubika kunoparadza fiber mumiriwo here?
Nzira yekubika chikafu inoputsa mamwe mafibers ayo uye sero yezvirimwa
Mhinduro yakanakisisa: Ko kubheka soda uye soda makristasi zvakafanana here?
Unoita sei kuti mazai akabikwa akaoma anakidze zviri nani?
Ko mukaka unoita kubheka soda here?
Ko masoseji eoffice anoda kubikwa here?
Iwe unobika sei bhakoni yakawanda?
Unogona here kusunga chando mapayi akatobikwa?